Bit By Bit - imibuzo Ukubuza - 3.6 Surveys kuhlobene nenye idatha
Ukuxhumanisa survey ukuze eminye imithombo idatha kwenza ukuba ukukhiqiza tilinganiso ukuthi obungenza engenakwenzeka ngenye.
survey Iningi kukhona ame-yedwa, imizamo self-equkethwe. Abazi ukwakha nomunye futhi musa ukusizakala zonke ezinye idatha okukhona emhlabeni. Lokhu kuzoshintsha. Kukhona nje okuningi kakhulu ukuba yazuza ngokuxhumanisa idatha ucwaningo eminye imithombo idatha, ezifana digital idatha trace okuxoxwe ngayo eSahlukweni 2 Ikghono leli lokubala ukuxhumanisa survey ukuze neminye imininingo kugcizelela ukuthi ukubuza nokugcina kukhona okuphelelisa futhi azithathi isikhundla.
Ikakhulu, ngizobuya ukuhlukanisa phakathi izindlela ezimbili ezahlukene oxhumanisa ezibuza nokugcina: ezibuza iyakhula futhi ahlanganiswe ngibuza (Figure 3.10). Ngo ocelayo Amplified, iminonjana digital kukhona akukho intshisekelo eqondile ngaphandle kofake ikhono labo ukusiza kukhishwe elingaphezulu kusukela idatha inhlolovo. Ngo ocelayo abasizakali, ngakolunye uhlangothi, trace digital empeleni has ngezinga elithile core kwenzalo idatha inhlolovo wakha umongo ezidingekayo ezisizungezile.
Umfanekiso 3.10: Izindlela ezimbili eziyinhloko ukuhlanganisa iminonjana digital zedathamininikwane. In ukubuza iyakhula (Isigaba 3.6.1) iminonjana digital asetshenziselwa ukuba ikhulise idatha inhlolovo. In ukubuza abasizakali (Isigaba 3.6.2) iminonjana digital empeleni anesilinganiso core kwenzalo idatha inhlolovo wakha umongo ezidingekayo ezisizungezile.